Waa Sidee Xog Baadhista Saxaafaddu, Sida Musuqa,Cadaalad Darada iyo Wixii La Midka ah?Qaybta 4 aad | Saxil News Network
Waa Sidee Xog Baadhista Saxaafaddu, Sida Musuqa,Cadaalad Darada iyo Wixii La Midka ah?Qaybta 4 aad
March 20, 2015 - Written by admin
Ilaha Lagu Kalsoon yahay
Marka la baadhayo Musuq-maasuqa ama Xad gudub kale,suxufiyow waa inaad la kulantaa dadka,kuwaasi oo ku siinaya oo kaliya xog,waa hadii aad u balan qaadayso in aanad weligaa sheegeyn magacyadooda ama aqoonsigooda.tani si aad ah,waa waxay u khuseysa dunuubta guud,halka dadku ay ka baqanayaan in dib wax ugu soo noqdaan.
Xaaladdahan waa inaad yeeshaa,laakiin waxaad ogaataa ,in mar marka qaar mustaqbalka in maxkamadu baadhi karto amuurahan,adigana lagaa dalban karo ilihii aad xogta ka heshay. Oo hadii aad diido waxad jabisay sharcigii meesha aad xogta ka heshay,xabsigaana lagugu xidhi karaa.
Hadii aad dadka aad xogta ka doonayso u balan qaado in aanad sheegeyn,waa inaad fulisaa balan qaadkaasi, sidaasi daraadeed hadii aanad xabsi diyaar u ahayn,waxba ha u balan qaadin marka ugu horeysaba dadka aad xogta ka doonayso in aanad sheegin.
Dadku waxay isku dayayaan inay joojiyaan shaqadaada. Tani waa hanjabaad laftigaaga lagugu sameeyo ama waa hanjabaad dhinaca dhaqaalaha la xidhiidha sida in shirkadii aad xayeysiiska aad u sameynaysay ugu hanjabto inay xayeysiiska ka joojinayso wargeyskaaga ama xaruntaada warbaahineed. Xita waxa lagugu hanjabayaa in lagaa joojiyo waxogaa guno ah,oo meel aad ka qaadanaysay,inkasta oo hanjabaadaha badan kooda aan la fulin. Dadka kugu sameynaya hanjabaada kaliga iyaga ayaa sii xumeynaya xaaladooda.
Laakiin dhamaan hanjabaadaha lagu geysto waa inaad si deg deg ah ugu wargeliso tifatirahaaga iyo garyaqaanka xaruntaada. Tani waxay ka qayb qaadaneysa in culus lagu saaro cida wada hanjabaada inay joojiso hanjabaadeeda. Waxayna sameynaysaa is ilaalin dheeraad ah, hadii qofku sameyo hanjabaad ,ha ogaado in bulshadii ogaanayso. Hadii aad goob joog u tahay hanjabaad lagu geystay,waxa laga yaabaa inaad gabagabada sheekada ku soo darto, waa markaad heshy talo dhinaca sharciga ah.
Baadhitaanka saxaafadu wuxuu had iyo goor abuuraan waxoogaa karaahiyo ah iyo khilaaf. Adigu suxufi hadii aanad awoodeeyn abuuritaanka khilaafkaasi,iska daa ha sameyn wax baadhitaan saxaafadeed ah.
Ku Shaqeynta Sharciga
Suxufiyiintu ma laha sharci gaar ah,xita marka ay baadhayaan musuq-maasuqa. Aan ahayn sida booliska,suxufiyiintu ma dhageysan karaan telefoonada dadka ama waraaqaha furan ee dadku isku diraan. Suxufiyiintu ma geli karaan dhisme qofkii lahaa uusan ogoleyn in la soo galo.
Suxufiyow waa inaad ku shaqeysaa sharciga,laakiin si sidaasi ka badan, adigu kuma isticlaami kartid xogta ,waxayna noqonaysa anshax daro helida xogtu markaasi. Tusaale ahaan adigu iskama dhigi kartid cid ama qof ay dadku dareemayaan inay sharci tahay inay xog siiyaan,sida booliiska ama saraakiisha dawladeed.
Si kastaba ha ahaatee,waxa jira xaalado aanad dadka u sheegeyn inaad tahay wariye marka aad xogta ururinayso.
Hadii aad arin ka shakido la xidhiidha dhinaca sharciga,la tasho tifatirahaaga ama garyaqaanka xaruntaada warbaahineed.
Baadhitaanka saxaafadeed waa in shaaca lagaga qaado arin muhiim ah oo dad ay doonayaan inay qariyaan.
Suxufiyiinta baadhitaanka sameynayaa waxa lagama maar maan ah inay yeeshaan xirfad guud oo ah ka warbixinta xogaha,laakiin si gaarana:
Waa inay si foojigo leh, maskaxda ugu hayaan oo ay u aqoonsadaan fikradaha muhiimka ah iyo xaqiiqooyinka, ay dadku isku dayayaan inay qariyaan,waa inay ku sameeyaan xogaha qoraal,fayl garyn,iyo isku geynta xaqiiqooyin badan,dulqaadku waa lagama maar maan xog baadhista,la xidhiidha dhamaan bulshada,waa inaad u yeelataa geesinimo hanjabaadaha kaaga imanaya dadka aad baadhista ku sameynayso,sidoo kalena wararka isku ururintooda ,waana inaad sidoo kale u hesha wax badhi taaraya cadeynaya aad isku soo ururisay,waxyaabaha sheekadaada ka hor iman kara oo kale,waa inaad difaacdaa meelaha aad ka heshay wararka lagu kalsoon yahay,had iyo goor la tasho garyaqaanka,hadii aad ka werwerto arin ku saabsan dhinaca sharciga oo aad sameynayso ama aad qorayso.
Wax kasta oo aad sameynayso laba jeer iska hubi,sida aad xogta ku heshay,sida aad u qorayso iyo gabagabada warkaaga.